ဒီတစ်ပတ် ပိတ်ရက်မှာ ဘယ်သွားရမယ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေသူတွေအတွက် မင်မင် အလင်းပြလိုက်ပါပြီနော်.. - For her Myanmar
မရိုးအီနိုင်တဲ့ ပွဲတွေချည်းပဲမို့ ယောင်းတို့စိတ်ဝင်စားမှာ သေချာပါတယ်နော်
အပတ်စဉ် ပိတ်ရက်တွေတိုင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့် ပွဲတွေအကြောင်း ဝေမျှပေးကျအချိန်လေး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီ…ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း ယောင်းတို့စိတ်ဝင်စားစေမယ့် ပွဲတွေကို ယူဆောင်လာပေးဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ ဘယ်ပွဲလေးတွေရှိနေလဲဆိုတာကို မင်မင်နဲ့အတူတူ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်….
နေရာ – Wyndham Hotel
နေ့ရက် – မေလ(၂၆)ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့
အချိန် – မနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၄) နာရီအထိ
ဒီပွဲလေးမှာတော့ အောက်ခြေကနေ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ရင်း စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်အဖြစ် ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့သူတွေက သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လို လှုပ်ရှား ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်းကို ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်တဲ့ ယောင်းတို့အနေနဲ့ ဒီပွဲလေးကနေ စိတ်ခွန်အားတွေနဲ့ ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရရှိနိုင်မှာမို့ သွားကိုသွားသင့်တဲ့ ပွဲလေးလို့ပဲ ပြောပါရစေ ယောင်းတို့ရေ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။
Related Article >>> Otaku တွေသာ နားလည်နိုင်မယ့် ပြဿနာ (၇)မျိုး
နေရာ – UKK Longyi Showroom
နေ့ရက် – မေလ(၂၆ ၊ ၂၇)ရက် ၊ စနေ တနင်္ဂနွေနေ့
အချိန် – ည(၆)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီထိ
ဒီပွဲလေးကတော့ အစားတစ်လိုင်းယောင်းတွေ အထူးနှစ်ခြိုက်မယ့် ပွဲလေးပါ။ အညာဒေသတစ်ဝိုက်က နာမည်ကြီးစားစရာတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ စိတ်ကြိုက်သုံးဆောင်နိုင်မှာဆိုတော့ နောက်ကျတဲ့ခြေထောက် သစ္စာဖောက်ပါပဲနော်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။
Sing Out Loud ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ
အချိန် – ည(၆)နာရီခွဲကနေ ည(၈)နာရီထိ
ဒီပွဲလေးကတော့ နိုင်ငံတကာကို လှည့်လည်သွားလာပြီး ဂီတပွဲတော်တွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ Yale University က ကျောင်းသားလူငယ်တွေပါဝင်တဲ့ Spizzwinks (?) နဲ့ Gitameit Music Institute တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပမယ့် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲလေးပါ။ Pop,
Jazz နှင့် Classical သီချင်းတွေကို အတီးမပါဘဲ အဆိုသက်သက်နဲ့ တင်ဆက်တတ်တဲ့ အဖွဲ့နဲ့ ဂီတမိတ်တို့ ပူးပေါင်းဖျော်ဖြေမှာဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ အတော်ကောင်းနေပါပြီနော်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဒီလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။
ယောင်းတို့ရေ…ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်အတွက် သွားလာလည်ပတ်စရာ ပွဲလေးတွေကို မင်မင်ကဝေမျှပေးပြီးပြီဆိုတော့ ဘယ်ပွဲကို ခြေဦးလှည့်မလဲဆိုတာ ယောင်းတို့တာဝန် ဖြစ်သွားပါပြီနော်..
နောက်အပတ်တွေမှာ ဘယ်လိုပွဲလေးတွေ ထပ်မံစုစည်းပေးဦးမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦး…
မရိုးအီနိုငျတဲ့ ပှဲတှခေညျြးပဲမို့ ယောငျးတို့စိတျဝငျစားမှာ သခြောပါတယျနျော
အပတျစဉျ ပိတျရကျတှတေိုငျး ရနျကုနျမွို့မှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမယျ့ ပှဲတှအေကွောငျး ဝမြှေပေးကအြခြိနျလေး ပွနျလညျရောကျရှိလာပါပွီ…ဒီတဈပတျမှာလညျး ယောငျးတို့စိတျဝငျစားစမေယျ့ ပှဲတှကေို ယူဆောငျလာပေးဖို့ အသငျ့ဖွဈနပွေီဆိုတော့ ဘယျပှဲလေးတှရှေိနလေဲဆိုတာကို မငျမငျနဲ့အတူတူ ကွညျ့လိုကျကွရအောငျနျော….
နရော – Wyndham Hotel
နရေ့ကျ – မလေ(၂၆)ရကျ ၊ တနင်ျဂနှနေေ့
အခြိနျ – မနကျ (၉) နာရီမှ ညနေ (၄) နာရီအထိ
ဒီပှဲလေးမှာတော့ အောကျခွကေနေ အကွိမျကွိမျကွိုးစားခဲ့ရငျး စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျအဖွဈ ရပျတညျလာနိုငျခဲ့သူတှကေ သူတို့ရဲ့ အောငျမွငျမှုနောကျကှယျမှာ ဘယျလို လှုပျရှား ရုနျးကနျခဲ့ရတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးတှနေဲ့ စိနျချေါမှုတှအေကွောငျးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အောငျမွငျတဲ့ လုပျငနျးရှငျဖွဈခငျြတဲ့ ယောငျးတို့အနနေဲ့ ဒီပှဲလေးကနေ စိတျခှနျအားတှနေဲ့ ဗဟုသုတတှေ အမြားကွီးရရှိနိုငျမှာမို့ သှားကိုသှားသငျ့တဲ့ ပှဲလေးလို့ပဲ ပွောပါရစေ ယောငျးတို့ရေ။ အသေးစိတျကိုတော့ ဒီလငျ့ချမှာ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုလို့ရပါတယျ။
Related Article >>> Otaku တှသော နားလညျနိုငျမယျ့ ပွဿနာ (၇)မြိုး
နရော – UKK Longyi Showroom
နရေ့ကျ – မလေ(၂၆ ၊ ၂၇)ရကျ ၊ စနေ တနင်ျဂနှနေေ့
အခြိနျ – ည(၆)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီထိ
ဒီပှဲလေးကတော့ အစားတဈလိုငျးယောငျးတှေ အထူးနှဈခွိုကျမယျ့ ပှဲလေးပါ။ အညာဒသေတဈဝိုကျက နာမညျကွီးစားစရာတှကေို တဈနရောတညျးမှာ စိတျကွိုကျသုံးဆောငျနိုငျမှာဆိုတော့ နောကျကတြဲ့ခွထေောကျ သစ်စာဖောကျပါပဲနျော။ အသေးစိတျကိုတော့ ဒီလငျ့ချမှာ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုလို့ရပါတယျ။
Sing Out Loud ဂီတဖြျောဖွပှေဲ
အခြိနျ – ည(၆)နာရီခှဲကနေ ည(၈)နာရီထိ
ဒီပှဲလေးကတော့ နိုငျငံတကာကို လှညျ့လညျသှားလာပွီး ဂီတပှဲတျောတှေ ပွုလုပျလရှေိ့တဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံ Yale University က ကြောငျးသားလူငယျတှပေါဝငျတဲ့ Spizzwinks (?) နဲ့ Gitameit Music Institute တို့ ပူးပေါငျးကငျြးပမယျ့ ဂီတဖြျောဖွပှေဲလေးပါ။ Pop,
Jazz နှငျ့ Classical သီခငျြးတှကေို အတီးမပါဘဲ အဆိုသကျသကျနဲ့ တငျဆကျတတျတဲ့ အဖှဲ့နဲ့ ဂီတမိတျတို့ ပူးပေါငျးဖြျောဖွမှောဆိုတော့ စိတျဝငျစားစရာ အတျောကောငျးနပေါပွီနျော။ အသေးစိတျကိုတော့ ဒီလငျ့ချမှာ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုလို့ရပါတယျ။
ယောငျးတို့ရေ…ဒီတဈပတျပိတျရကျအတှကျ သှားလာလညျပတျစရာ ပှဲလေးတှကေို မငျမငျကဝမြှေပေးပွီးပွီဆိုတော့ ဘယျပှဲကို ခွဦေးလှညျ့မလဲဆိုတာ ယောငျးတို့တာဝနျ ဖွဈသှားပါပွီနျော..
နောကျအပတျတှမှော ဘယျလိုပှဲလေးတှေ ထပျမံစုစညျးပေးဦးမလဲဆိုတာကို ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ပေးကွပါဦး…
Tags: concert, Entertainment, Event, Happy, Hero, market, zero